लेखक भएर हिँड्नु भनेको आफ्नो बाटो आफैँ बनाउनु हो पुर्खाहरूले भनेका थिए- ‘देख्नै नसक्ने अवस्थामा लेखक बनेर बस्न आवश्यक हुँदैन’
अशोक वाजपेयी आइतबार, चैत २७, २०७८ मा प्रकाशित
वसन्त पञ्चमीमा बनारसको ‘रूपवाणी’ नामक संस्थाको आग्रहमा निरालाको बारेमा केही सुन्ने र बोल्ने अवसर मिल्यो । निरालाले कवितामा नै भनेका थिए, ‘म कवि हुँ, उज्यालो पाएको छु ।’ यो प्रकाश कहाँबाट आयो ? उहाँको कवितामा यो प्रकाशको स्थान के हो ? निरालाको काव्यात्मक प्रकाशले आज हामीलाई के दिन्छ ? यी केही कुरामा हाम्रो विचार गढ्यो ।
यसलाई कुनै समय छायाँवादबाट विचलन मानिन्थ्यो । तर, तथ्य यो हो कि निरालाले प्रकाश परम्पराबाट सिक्नु भएको छ । वैदिक कविताबाट कालिदास, जयदेव र पछि तुलसीदासबाट। उहाँको कविताले एक तहमा संस्कृतलाई खरी बोलीमा पुन खोज्छ। उहाँ धेरै दुर्लभ संस्कृत शब्दहरू वा शब्द-सेटहरू अन्धाधुन्ध रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ । त्यतिबेला उहाँको काव्यात्मक भाषामा संस्कृत जति उपभोग गरिएको थियो, सायद उहाँका समकालीनहरूमध्ये कोही पनि थिएनन्।
प्रतिभा प्रकाश ग्रहण गर्ने र प्रकाश ल्याउने पनि छ। अद्वितीय स्व-प्रकाशित कविहरू पनि छन् । धेरै कवि-आलोचक-संगीतकार-विद्वान आदिले उहाँबाट प्रकाश पाएका छन्। निरालाले पनि आफ्नो आत्मविश्वास, कविता र भाषाबाट उज्यालो पाउनु भएको थियो । हिन्दीका लागि उहाँले महात्मा गान्धी र नेहरूसँग पनि साहसपूर्वक लड्नुभयो ।
सोही कारणले गर्दा निरालाले आफ्नो कविताको लागि कहिल्यै कुनै रजत राज्य माग्नु भएन तर पनि उहाँले उपेक्षा, अवहेलना र वञ्चितताको सामना गर्नुपरेको थियो र त्यसबाट पनि उहाँले उज्यालो पाउनु भयो । उहाँका ‘कुल्ली भाट’, ‘बिल्लेसुर बक्रीहा’, ‘चतुरी चमार’ आदि गद्य कृतिलाई ध्यानमा राख्यौं भने निरालाले सामान्य मानवताबाट पनि उज्यालो पाउनु भएको थियो । यहीँबाट साधारणको महिमा र केन्द्रीयताका लागि बहुआयामिक प्रयास सुरु भयो ।
‘तुलसीदास’ काव्यमा महाकविको वर्णन गर्दै निरालाले लेख्नु भएको छ, ‘आयत तान्ने पुसदेह गत– डर र उहाँको उज्यालोमा निस्सन्देह’, जुन निराला स्वयंको व्यक्तिचित्र हुन सक्छ । ‘नईशंखाकार’ पार गरेको पाए पनि उहाँमा पाइने र सृजना भएको प्रकाश निस्सन्देह छ। उहाँ सधैं अन्धकारसँग लड्ने ज्योति हुनुहुन्छ।
उज्यालोसँगै अदम्य शक्ति र निर्भयताका कविहरू पनि छन् । एक तहमा उहाँको कवितामा उहाँबाट एउटा रेखा उधारो लिएर ‘शक्तिको मौलिक कल्पना’ भन्नुहुन्छ भने अर्को तहमा निडर कल्पनाशक्ति र ज्वलन्त कल्पना पनि छ ।
रामस्वरूप चतुर्वेदीले छायाँवादलाई शक्तिकाव्य भनी व्याख्या गरेकाले स्वतन्त्रता संग्राम र सत्याग्रहको युगमा शक्तिकाव्यका अग्रगामी कवि निराला र प्रसाद हुन् । वैदिक कविताका सम्बन्धमा निरालाले यसमा ‘अद्भुत शक्तिको ज्योति’ रहेको बताउनुभयो । निराला यही शक्ति र प्रकाशको उत्तराधिकार योजना गर्ने कवि हुन् ।
निरालाले आफ्नो असक्षमता र अभावलाई निर्ममतापूर्वक वर्णन गर्नुभएको छ । ‘तिमीलाई कुनै उपकार गर्न सकिएन’, ‘स्वार्थमा हराउँदै गएँ’, ‘मैले खर्च गर्न सकिनँ’, ‘मैले राम्रोसँग पालनपोषण गर्न सकिन’, ‘तर पनि, त्यसैगरी म कविको जीवनमा व्यर्थ व्यस्त भएँ’, ‘मेरो जीवन व्यर्थमा गुमाएँ’, आदि पङ्क्तिहरू आत्म-आलोचनाको प्रमाण हुन्।
तर, निरालाको केन्द्रीय मुद्रा शक्ति हो, कुनै किसिमको दुखको होइन, आत्म-आलोचना हो, विलापको होइन। उहाँले सजिलै भन्नु भएको छ, ‘मैले संसारलाई फूल र फल दिएँ र मेरो तेजले छक्क परेको छु।’ ‘हिन्दीमा रवीन्द्रनाथ छैन’ जस्ता स्थापनालाई लिएर महात्मा गान्धीसँग र जयशंकर प्रसादको मृत्युमा कांग्रेसले शोक प्रस्ताव पारित नगरेकोमा नेहरूसँग विवाद हुँदादेखि यो तीव्रता अनौठो देखिन्छ।
निरालाले आफ्नो कविता र गद्यमा लेख्नुभएको खरीबोलीको प्रकृतिमा उहाँको व्यक्तित्वको गहिरो छायाँ छ, उहाँको स्वर फरक छ। यसमा तत्समलाई गौरव र प्रतिष्ठालाई छोडेर संघर्षको वाक्यांश बनाउने प्रयास गरिएको छ र त्यसमा केही ठाउँमा बंगाली व्यञ्जनहरू सुन्न सकिन्छ। ‘अभी न होगा मेरा अन्त’, ‘सुमन भर न लिये’, ‘मुझे स्नेह क्या मिल न सकेगा’, ‘नहीं फूल, जीवन अविकच है/यह सच है’, ‘प्रात तव द्वार पर’, ‘कुछ न हुआ, न हो’, ‘सहज सहज पग धर आओ उतर’, ‘बापू तुम मुर्गी खाते यदि’, ‘मैं अकेला’, ‘स्नेह-निर्झर वह गया है’, ‘काले काले बादल आये, न आये वीर जवाहरलाल’, ‘जाल भी ऐसा चला/कि थोड़ों के पेट में बहुतों को आना पड़ा’, ‘राजे ने अपनी रखवाली की’, ‘गीत गाने दो मुझे/वेदना को रोकने दो’, ‘मरा हूं हज़ार मरण’, ‘सुख का दिन डूबे डूब जाय’, ‘सीधी राह मुझे चलने दो’, ‘राम के हुए तो बने काम’, ‘बांधो न नाव इस ठांव बन्धु’, ‘पत्रोत्कण्ठित जीवन का विष बुझा हुआ है’ आदि । उहाँका कविताका केही पङ्क्तिले मात्रै भाषाका कति रुप, मुहावरा प्रयोग भइरहेका छन् भनेर बताउँछन् । उहाँको अन्तिम कविताको अन्तिम पङ्क्तिले पनि फरक रूप लिन्छः ‘पुन सवेरा एक र फेरा हो जी का’।
प्रकाश, तेज, आभा, प्रभा, दुति, चमक आदि शब्दहरू निरालाको प्रकाशकेन्द्रित प्रवृत्तिलाई व्यक्त गर्न आएका छन्। उनको एउटा कविता छ-
उहाँलाई सृष्टिबाट देख्नु स्वभाविक हो
उहाँलाई ‘लोक-आलोक-सत्रन’ का कवि पनि भन्न सकिन्छ। अन्ततः अद्वितीय शक्ति-सौंदर्य-संघर्ष-पीडा-प्रकाश यी पाँच तत्वका कवि हुन्। अत्यन्तै निराशाजनक समयमा पनि उहाँ आफ्ना शब्दहरू र ‘आशाको दियो बल्दै’ हामीसँग हुनुहुन्छ।
‘त्यहाँ उपायहरू छन्’
रजा पुस्तक शृङ्खला अन्तर्गत प्रकाशित ‘अग्यको उद्धरण’ पुस्तक हेर्दै थिएः यही चैत ७ गते उहाँ १११ वर्षको हुनुहुनेछ । यो उद्धरणले मेरो ध्यान खिच्यो-
‘मैले सुरुमा एक लेखक र लेखकको हैसियतमा वातावरणको समस्यालाई हेरिरहेछु भनी सोचेको भए पनि त्यसको बाटो छ भन्ने विश्वास पनि समेटिएको छ । जब लेखक भएर देख्न सकिने अवस्था हुँदैन, तब लेखक नै रहन बाध्यता हुँदैन । त्यहाँ पक्कै पनि तरिकाहरू छन्। तर, यिनीहरू राजमार्ग हुन् भन्न गाह्रो छ । झुट पनि हुन सक्छ । त्यहाँ बाटोहरू हुनेछन्, तर सबै कच्चा हुनेछन् र सबैको आ-आफ्नै बाटो हुनेछ। सायद लेखक भएर हिँड्नुको अर्थ पनि राजमार्गको दाबी त्याग्नु हो, आफ्नै बाटो बनाउनु हो ।’
अर्को उद्धरणको यो अंशले ध्यान आकर्षित गर्दछ-
,... लेखकले आफ्नो समय र समाजको व्यापक भावनाको विरुद्धमा एक्लै उभिनुपर्ने अवस्था कुनै पनि कालखण्डमा हुन सक्छ। यस्ता अवसरहरू पनि जीवनमा सधैं आउँदैनन्, तर जब यस्ता अवसरहरू आउँछन् तब कविले हाम्रा अगाडि जे प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ, त्यो उहाँका लागि मात्रै मूल्यवान नहुन सक्छ। बरु, सायद हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई अर्थ, लक्ष्य र दिशा दिन आवश्यक छ। उपनिषदले त्यसबेला मानवजातिलाई दिएको चुनौतीको जवाफ उहाँले दिनु असम्भव छैन ।’
अग्नेयले कुरा गरिरहेको अवस्था आज पनि हाम्रो अगाडि छ । कहिलेकाहीँ यस्तो असहजता छ कि त्यहाँ कुनै बाटो छैन। वा हामीले रोजेको बाटोमा अरू कोही छैन। आज जसरी समाज हिंसा-घृणा-असत्य-अन्यायको चपेटामा परेको छ, त्यसरी नै हामी समाजका लेखकहरू पनि विपक्षमा छौँ भन्ने लाग्छ ।
अशोक वाजपेयीबाट थप